Codsiga Visa Hindiya ee khadka tooska ah, eVisa India - Hindiya Visa Online
Habka Codsiga Visa Hindida
Dowladda Hindiya waxay ka dhigtay Codsiga Visa-ga Hindiya ee khadka tooska ah ama Habka Codsiga e-Visa Hindida mid fudud, fudud, khadka ah, waxaad e-mayl ku heli doontaa e-Visa India. Tani waa daboolid awood leh oo ku saabsan dhammaan faahfaahinta aad u baahan tahay inaad ka ogaato habkan Codsiga Dal-ku-galka Hindiya ee Online-ka ah.
Dal-ku-galka Hindiya hadda laguma heli karo kaliya qaabka warqadda soo jireenka ah ee lagu codsanayo taas oo ah mid dhib badan sida waxyaabaha kale ee ay tahay inaad booqato safaaradda Hindiya ee deegaankaaga si aad u hesho Visa Hindiya. Hadda, dawladda Hindiya waxay samaysay way ka sahlan tahay weligeed, waxaana sidoo kale jira elektaroonig ama e-Visa-ka Hindiya (E-Visa India Online) oo la heli karo oo si fudud looga dalban karo khadka tooska ah. Tani waxay ka dhigtay booqashada Hindiya mid aad ugu habboon safarada caalamiga ah ee soo maraya mid aad u fudud Codsiga Visa Hindida Habka in la siiyo e-Visa Hindiya. Haddi ay tahay ujeedada dalxiiska. meelaha la, iyo madadaalada, ama ganacsiga, ama daawaynta, Foomka Codsiga Visa Hindiya ee dhammaan noocyadan e-Visas (e-Visa India Online) aad ayay u fududahay in la buuxiyo. Adigoo raacaya tilmaan-bixiyahan Hannaanka Codsiga Dal-ku-galka Hindiya waad awoodaa ka dalbo fiisada elektaroonigga ah e-Visa internetka halkan.
Si guud qaybaha Hindiya e-Visa waa Dalxiisayaasha Hindida e-Visa, Ganacsiga Hindida e-Visa, E-Visa-da Caafimaadka Hindida iyo Ka Qayb-galka Caafimaadka Hindida e-Visa.
Kahor intaadan buuxin Foomka Codsiga Visa-ga Hindiya ee khadka tooska ah:
Kahor intaadan buuxin Foomka Codsiga Fiisaha Hindiya waa inaad ogaataa shuruudaha u-qalmitaanka e-Visa (e-Visa India Online). Waxaad awoodi doontaa oo kaliya inaad dalbato fiisada elektaroonigga ah ee Hindida ah haddii aad buuxiso dhammaan shuruudaha u-qalmitaanka.
Waxaad u baahan tahay inaad muwaadin ka noqoto mid ka mid ah 180 + dal Muwaadiniinteedu xaq u leeyihiin Fiisaha Hindiya.
The ujeedada booqashadaada waa inuu noqdaa mid dalxiis, ganacsi, ama caafimaad.
Waxaad ku geli kartaa dalka oo keliya adoo maraya qaar Oggolaanshaha Soogalootiga la oggolaaday kuwaasoo isugu jira 28 garoon diyaaradeed iyo 5 dekedood.
La kulan shuruudaha u-qalmitaanka gaar u ah nooca elektaroonigga ah ee aad codsaneyso taas oo kuxiran ujeedada booqashadaada Hindiya.
Intaa waxaa sii dheer, waa inaad sidoo kale hubisaa inaad haysato diyaar dhammaan dukumintiyada iyo macluumaadka lagaa rabo inaad bixiso intaad dalbaneysid fiisada elektaroonigga ah ee Hindida ah. Halkan ka akhriso waxa ku saabsan Indian e-Visa (e-Visa India Online) shuruudaha sawirka
Dukumiintiyada Waa Inaad Bixisaa Intaad Codsaneyso E-Visa-ha Hindiya:
Macno malahan nooca e-Visa ee aad codsaneyso, waxaad u baahan doontaa inaad siiso nuqulo jilicsan dukumiintiyada soo socda:
Nuqul elektiroonig ah ama la marsiiyey oo ah bogga koowaad (taariikh nololeed) ee baasaboorka booqdaha, oo ay tahay inuu noqdo Baasaboor caadi ah, oo ay tahay inuu ahaado mid shaqeynaya ugu yaraan 6 bilood laga bilaabo taariikhda soo gelitaanka Hindiya, haddii kale waxaad u baahan doontaa inaad cusboonaysiiso baasaboorkaaga.
Nuqul booqdaha dhowaan sawir midab baasaboor ah (kaliya wajiga, oo waxaa lagu qaadan karaa taleefan), cinwaanka emaylka shaqada, iyo kaarka bangiga ama kaarka deynta ee bixinta khidmadaha dalabka.
A soo noqosho ama tigidh sii socda dalka ka baxsan.
Shuruudaha u gaarka ah nooca e-Visa ee aad codsaneyso:
Kaarka Ganacsiga ee e-Visa-gan ee Ganacsi
Nidaamka Codsiga Visa-ha Hindiya ee Faahfaahin:
Markaad haysato wax kasta oo loo baahan yahay waad dalban kartaa fiisada elektaroonigga ah ee Hindida ah. Waa inaad ka dalbataa ugu yaraan 4-7 maalmood kahor duulimaadkaaga ama soo galitaanka dalka maadaama ay qaadaneyso 3-4 maalmood inta la ansaxinayo codsiga Visa-ha. Nidaamka oo dhami waa khadka tooska ah adiguna waad samayn lahayd maahan inaad tagto Safaaradda Hindiya wadankaaga sabab kastoo jirta. Si toos ah ayaad u tagi kartaa garoonka diyaaradaha ama garoonka markab Cruise ka dib markaad iibsato e-Visa Indian (e-Visa India Online) email ahaan cinwaankaaga.
Waa kuwan dhammaan Nidaamka Codsiga Visa-ha ee tallaabooyinka:
Waa inaad buuxisaa Foomka Codsiga Visa Hindida oo ku soo gudbi khadka tooska ah.
Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso faahfaahinta shaqsiyeed, faahfaahinta Baasaboorka, dabeecadda iyo faahfaahinta dambigii hore. Hubso in faahfaahinta Baasaboorkaaga ee aad gacanta ku geliso foomka dalabku ay u dhigmaan faahfaahinta ka muuqata Baasaboorkaaga.
Waxaad sidoo kale yeelan doontaa inaad soo dejiso sawir qaab baasaboor ah oo wejigaaga ah, taas oo ay tahay inay waafaqsanaato qeexitaannada ay dejisay Dowladda Hindiya. Tilmaamahaas waa la akhrin karaahalkan.
Taas ka dib waxaad ku bixin kartaa lacag bixinta adoo isticmaalaya lacag ka mid ah 135 dal oo lacagtiisa loo ogol yahay. Waxaad isticmaali kartaa kaarka deynta, kaarka bangiga, ama Paypal si aad tan u sameyso.
Bixinta kadib kiisaska badankood faahfaahinta qoyskaaga, waalidiintaada, iyo saygaaga / saygaaga ayaa la weydiin doonaa. Waxaa sidoo kale lagu weydiin doonaa inaad bixiso macluumaad dheeri ah oo ku saleysan ujeedada booqashadaada iyo nooca Visa ee aad codsaneyso.
Fiisaha Dalxiiska elektaroonigga ah, waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo caddaynta haysashada lacag ku filan si aad u maal galiso safarkaaga aadna u joogtid Hindiya.
Ganacsi elektaroonig ah, waa inaad keentaa kaarkaaga ganacsiga ama saxiixa iimaylka, iyo cinwaanka websaydhka, faahfaahinta ku saabsan ururka Hindida ah ee aad booqan doontid, iyo warqad casuumaad ah oo ka socota shirkadda la sheegay.
E-Visa-da Caafimaadka, waa inaad keentaa warqad ka socota isbitaalka Hindiya waxaad ka helaysaa daaweyn caafimaad kana jawaabaysaa wixii su'aalo ah ee la mid ah.
E-Visa-ha Dalxiiska Caafimaadka, waa inaad bixisaa faahfaahinta Fiisaha bukaanka inaad lasocoto
Waa inaad ku bixisaa dhammaan macluumaadkan adoo adeegsanaya xiriiriye ammaan ah oo loo diro emaylkaaga.
Xaaladaha badankood go'aanka Fiisahaaga waxaa lagu sameyn doonaa 3-4 maalmood gudahood oo haddii la aqbalo waxaad ka heli doontaa fiisaha elektarooniga ah khadka tooska ah. Waa inaad ku qaadatid nuqul jilicsan oo daabacan ah e-Visa-gii garoonka.
Sidaad arki karto, Foomka Codsiga Dal-ku-galka Hindiya iyo dhammaan habka Codsiga Dal-ku-galka ee Hindida khadka tooska ah waa wax fudud oo toos ah mana aha inaad wax dhib ah kala kulanto. Haddii, si kastaba ha ahaatee, aad u baahan tahay wax caddayn ah waa inaad la xiriirtaa Xarunta Caawinta E-Visa-ka ee Hindida taageero iyo hagitaan. Dowladda Hindiya waxay howsha ka dhigtay mid ku habboon. Muwaadiniinta Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska, Jarmalka marka laga reebo waddammada kale ee 180 + ayaa xaq u leh.